Anarana Radoje Domanović
Teraka 16 Febroary 1873
Maty 17 Aogositra 1908
Radoje Domanović (16 febroary 1873 – 17 aogositra 1908) dia mpanoratra serbianina, mpanao gazety sady mpampianatra, ny sombin-tantara manesoeso no nampalaza azy.
2 Asa soratra
Radoje Domanović dia teraka tany amin’ny tananan’i Ovsište ao afovoan-tanin’ny Serbia, zanaka mpampiantra sady mpandraharaha Miloš Domanović, sy Persida Cukić, taranak’i Pavle Cukić, anisan’ny komandy miaramila tamin’ny fikomiana serbianina voalohany sy faharoa. Tao amin’ny tananan’ny Gornje Jarušice akaikin’ny Kragujevac izy no nandalo ny fahazazany, tany izy no nanao ny sekoly fanabeazana fototra ambaratonga voalohany. Nanohy ny fianarany tany Kragujevac izy, ary tao amin’ny sampam-pianarana filozofia tao amin’ny oniversite an’ny Belgrade, tao izy no nianatra manokana ny teny serbianina sy ny tantarany.
Tamin’ny taona 1895, dia nanao ny fihaonana voalohany mba ho lasa mpampianatra tao Pirot, atsimon’ny Serbia, faritra izay vao nafahana tamin’ny fanjakana otomàna vao haingana. Tao Pirot dia nifankahalala tamin’i Jaša Prodanović (1867–1948), mpampianatra sy mafana fo iray izy izay nanampy azy hanefy ny heviny ara-politika. Tao koa no nifankahafantarany tamin’ny vadiny, Natalija Raketić (1875–1939), mpampianatra tao Sremski Karlovci, izy no nanohana azy tamin’ireo sedra nolalovany tamin’ny fiainany. Nanan-janaka telo izy ireo.
Nony niditra tao amin’ny antoko mpanohitra Antoko Radika izy, dia nifandahatra tamin’ny fitondran’i Obrenović, ary nafindra tany Vranje izy tamin’ny faran’ny taona 1895. Tamin’ny taona 1896 dia nafindra tany Leskovac indray izy. Tamin’i Domanović mbola mpampiantra dia efa nanomboka nanoratra. namoaka ny sombin-tantarany voalohany izy tamin’ny taona 1895. Taorian’ny fisehoana voalohany fanoherana ny fitondrana nataony ny taona 1898, dia samy natsahatra tamin’ny asam-panjakana izy sy ny vadiny. I Domanović kosa dia nifindra monina nankany Belgrade niaraka tamin’ny fianakaviany.
Tany Belgrade izy dia nanomboka niara-niasa tamina mpanoratra hafa tao amin’ny “Zvezda” (Kintana) izay gazety mivoaka isan-kerinandro, sy tao amin’ny gazety mpanohatra ara-politika “Odjek” (Ako). Tamin’izay fotoana izay izy dia nanomboka nanoratra sy namoaka ny sombin-tantara manesoeso voalohany nataony, toy ny “Devoly” sy “Ny fanafoanana ny fitiavana”. Ny famoahana ireto tantara ireto: “Mpitarika” (1901) sy “Stradija” (1902), no nampalaza an’I Radoje, tanatin’izany izy dia nanendrikendrika sy nanaboraka ny fihatsarambelatsihy sy ny fahadisoan’ny fitondrana.
Taorian’ny fanonganam-panjakana izay nanapitra ny fanjakan’i Aleksandar Obrenović tamin’ny taona 1903 dia teo an-tampon’ny lazany i Domanović, ka tonga mpanora-dalàna tao amin’ny Ministeran’ny Fampianarana. Ary ny fanjakana nipetraka dia namela azy handeha ho any Alemaina hanao fanokanana mandritra ny eritaona, izay nataony tao Munich. Niverina tao Serbbia i Radoje ka kivy tamin’ny tsy fiovan’ny fiaraha-monina. Nanokatra ny gazety politikany manokana izy, “Stradija”, tao izy no nanakihana ny fahalemen’ny demokrasia vaovao, kanefa tsy nitovy tamin’ny taloha intsony ny fiantefan’ny asa sorany tany amin’ny vahoaka.
Nodimandry atsasak’adiny taorian’ny sasak’alina ny 17 aogositra 1908 i Radoje Domanović, teo amin’ny faha 35 taonany rehefa avy niady tamin’ny aretin-tratra sy tioberkilaozy izy. Nalevina tao amin’ny fasam-baovao tao Belgrade izy. Ny ambin’ny asa sorany izay tsy voavoaka dia very daholo nandritra ny Ady Lehibe Voalohany.
Asa soratra[hanova | hanova ny fango]
Ireo asa soratr’i Radoje Domanović fanta-daza dia ahitana ny:
Fikomiana maoderina, 1902
Ilay tombo-kavatsa, 1899
Ny eritreritr’omby serbianina tsotra, 1902
Ny fanafoanana ny fitiavana, 1898
Ny fiverenan’i Kraljević Marko eo anivon’ny Serbianina, 1901
Ranomasina maty, 1902
↑ Tetikasa “Radoje Domanović”. domanovic.org. Retrieved on 27-03-2021.
((en)) ((sr)) ((mg)) Asa soratr’i Radoje Domanović feno
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Radoje_Domanović&oldid=1010335"
Teraka tamin'ny taona 1873
Maty tamin'ny taona 1908
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2021 amin'ny 09:22 ity pejy ity.